I-China Folded Leaflet Flyer yokuPrinta iFlash eSebenzayo kunye noMboneleli | Ushicilelo loLwazi
Igama lemveliso: Inkonzo yokushicilela enamagqabantshintshi esongiweyo
Ubungakanani kunye noyilo: ngokwezifiso
Ukugqitywa kokugqitywa: ukulila kwe-matte okanye ngaphandle kokugqitywa
Ixabiso leyunithi: usd0.05-usd0.9
Uch uchazekile malunga nokuba kutheni kufuneka kusetyenziswe intengiso yeencwadana. Zenye zezona zinto ziluncedo zentengiso. Ayipheleli nje ekutsaleni ingqalelo yentengiso yakho ekujolise kuyo ngemiboniso emihle, banendawo eninzi yokuchaza iinkcukacha zemveliso kunye neenkonzo zabo.
Asinakuthetha into enye malunga nendlela oyisebenzisa ngayo incwadana. Ewe kunjalo, zininzi iitemplate zencwadana yasimahla ezingenanto onokuyisebenzisa ukukhuthaza. Nangona kunjalo, amanqaku ambalwa axubusha ukusongelwa kwencwadana kunye nendlela yokuyisebenzisa.
Into ekhethekileyo kule ncwadana inemifanekiso kukuba ineefolda ezininzi. Ukwenza intengiso yencwadana efanelekileyo, ukwazi ukuba uyisebenzisa nini incwadana. Emva kokuphonononga ukuba yeyiphi imixholo eqhubeka ngcono kwintengiso yakho, kuya kufuneka ukhethe ukuba yeyiphi na iifolda zencwadana ezifanelekileyo.
Kwi-Run Runner, sinikezela ngeefolda ezininzi onokuzongeza kwincwadana yakho. Umceli mngeni kuphela kukhetho. Nazi iintlobo ezahlukeneyo zokubhalwa kwencwadana kunye ne-USES yazo efanelekileyo.
Eyona ndlela ilula yokugoba incwadana kukusongeka kwisiqingatha. Olu khetho luqulunqa iiphaneli ezimbini kwicala ngalinye, njengencwadi. Ungayisebenzisa xa usenza intetho elula ngaphandle kwamaphepha amaninzi. Iphepha elikhulu ekhaya lingaba lithuba elihle lokubandakanya uyilo lokubonwa.
Iipesenti ezintathu off yeyona ndlela yethu ithandwayo. Ikwabizwa ngokuba kukubhalwa kweleta, le folda yencwadana yaseklasini inebuso abathathu elilinganayo kwicala ngalinye. Zisongelana ngokwamaqela ngendlela eyahlukileyo. Ezi folds zihlala zisetyenziswa kumkhankaso wentengiso ukuchaza iimveliso kunye neenkonzo ngenxa yoyilo olwahlukileyo kuzo. Ezi folda zintathu zilinganayo kwaye zinomdla, ngakumbi ngokulandelelana kwamanyathelo kunye noluhlu olunamanani.
Nceda uqaphele ukuba asithengisi nayiphi na isitokhwe. Sibonelela ngeenkonzo zokuprinta kwaye sifuna iifayile ze-vector ze-DVD ukuze ziprintwe. Ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo, kufuneka sazi ubungakanani bencwadi yakho, ubungakanani bamaphepha angaphakathi, umbala wekhava kunye nengaphakathi, njl.
Ubungakanani esivame ukushicilela ngu-A4, A5, njl.
Edlulileyo: Inkonzo yokuPrinta ibhokisi yokuHanjiswa kweBhokisi e-Shayina e-China
Okulandelayo: UkuPrinta okuPhezulu kweA2 kwindawo yokuThengisa eTshayina
Ukuprintwa kwencwadana yeVenkile yexabiso eliphantsi enomgangatho ogqibeleleyo ...